Sakafo rano - Very 5 kg tsy misy adin-tsaina - mora sy tsotra
Ny sakafon-drano na ny sakafo amin'ny rano angamba no tsotra indrindra amin'ny fihinanana lanja rehetra. Na dia sarotra aza ny miantso azy io ho sakafony, satria famerenana amin'ny laoniny ny metabolisma mahazatra sy ny fiasan'ny excretory miaraka amin'ny fanampiana rano.
Misy karazany roa ny fandikana ny sakafo amin'ny rano - tsotra sy hentitra kokoa. Mifanaraka amin'izany, ny fihenan-danja amin'ny iray henjana dia miharihary kokoa, raha ny filazan'ireo izay nanandrana azy, fa tsy amin'ny sakafo rano tsotra.
Ny sakafon'ny rano tsotra dia tsy midika fameperana sakafo, izany hoe mihinana tsy miova amin'ny fomba taloha ihany, fa ianao ihany no misotro rano araky ny rafitra iray - izany no fomba fahandro manontolo.
Ny rafitra dia ao anaty fisotroana rano madio 2 litatra isan'andro. Ny fikajiana marina ny habetsaky ny rano ilain'ny vatanao amin'ny sakafo amin'ny rano dia isaina amin'ny alàlan'ny raikipohy: Weight / 20, izany hoe, raha milanja 70 kg ianao, dia 3 litatra isan'andro ny fatra rano ilainao amin'ny sakafo. Saingy tsy tokony hosotroina tampoka ny rano.
Misotro rano tsara izahay
Aza hadino ny misotro rano iray vera amin'ny hafanan'ny efitrano 25 minitra alohan'ny sakafo. Mandritra sy aorian'ny sakafo dia tsy tokony hosotroina ny rano sy ranon-javatra hafa (ranom-boankazo, dite, compote, sns.). Ary ny fihinanana rano manaraka dia tokony ho 1, 5 ora aorian'ny fisakafoanana. Tsy asaina mihinana be koa ianao aorian'ny 6, fa tsara kokoa ny misotro ny rano sisa amin'ny isa voaisa fa tsy mamo mandritra ny andro.
Ny karazana zava-pisotro misy lasopy sy lasopy hafa dia tsy tafiditra ao anaty kajy.
Ny fenitry ny rano dia ny tena ilaina amin'ny rano madio, tsy misy gazy, tsy mineraly nefa tsy misy additives. Ilaina ny misafidy rano anaty tavoahangy na rano voasivana, satria ny rano fantsakana ihany no handoto ny vatanao.
Ny fototr'io fomba io dia raha ny marina dia tsy misotro velively ny habetsaky ny rano ilain'ny vatana isika, ary matetika ny atidohantsika dia "misavoritaka" ny faniriana hisotro amin'ny faniriana hihinana, ary raha tokony ho vera iray vera dia mihinana sakafo kely isika.
Mandà tsy hisotro sakafo, avelantsika ho levona amin'ny toe-javatra voajanahary amin'ny vatana ny sakafo - miaraka amin'ny fanampian'ny ranom-panafody, nefa tsy alohan-drano izany.
Raha misotro ranom-boankazo na dite isika, dia manamboatra fermentation sakafo ao an-kibo, izay mitarika fihenan'ny fandevonan-kanina sy famotehana ny sakafo, ary noho izany ny fanangonana zavatra manimba, poizina ary lanjany be loatra. Ny rano amin'ny habetsany ilaina dia manadio ny tsinay, mamela ny sela hanavao ny tenany ara-potoana.
Vokatry ny rano ny fihenan-danja
Aorian'ny sakafo dia tokony hahatsapa ianao fa ny hoditra dia madio sy madio kokoa. Ny sakafo toy izany dia azo ampiasaina mandritra ny 3-4 herinandro, ary ny vokany dia tokony ho 2-3 kg farafahakeliny lanja isan-kerinandro.
Saingy tsy mora toy ny hoe mahafoy kaopy kafe iray aorian'ny sakafo maraina na ranom-boankazo iray vera amin'ny sakafo antoandro. Amin'ny voalohany dia mety hangetaheta be ianao aorian'ny sakafo.
Rehefa naharesy ity hetaheta ity indroa dia tokony ho lasa fahazarana izany ary tsy ho sarotra aminao loatra izany. Afaka misotro dite na kafe maitso eo anelanelan'ny sakafo ianao, fa ireo zava-pisotro ireo dia tsy hanisa ny rano ilaina isan'andro.
Ny fihinana rano sarotra kokoa sy henjana kokoa dia fitambarana fisotro rano betsaka, miaraka amin'ny famerana ny sakafo (hatramin'ny 5 litatra isan'andro).
Tsy afaka mipetraka amin'ny sakafo toy izany ianao mandritra ny herinandro mahery, saingy mitondra vokatra azo tsapain-tanana kokoa izany amin'ny fihinanana lanja. Mbola misotro rano madio ianao, nefa mandritra izany fotoana izany dia avelao ny sakafo mamy sy masira ary starchy.
Izay azonao sy tokony hohanina amin'ny sakafo anaty rano
Fromazy, kefir, paoma, legioma ary anana, yolk, atody, trondro mahia ary hazan-dranomasina - izany rehetra izany amin'ny ampahany kely mandritra ny andro, ary koa tsy misotro sy misotro rano 25 minitra alohan'ny sakafo.
Ireo vokatra rehetra ireo dia ambany kaloria, nefa misy vitamina sy microelement ilaina amin'ny vatana, izay "voasasa" ara-bakiteny avy amin'ny vatana miaraka amin'ny sakafo rano henjana.
Mandritra izany fotoana izany dia ilaina ny misotro multivitamins na vitamina + mineraly amin'ny toeram-pitsaboana maro samihafa sy ny fitsaboana voajanahary (tsara kokoa amin'ny homeopathic) hanohanana ny aty, satria ny fiovan'ny fihinanana rano henjana dia mety hampahory azy.
Ity karazan-tsakafo ity dia hanampy anao hamoy 5-7 kg isan-kerinandro, ohatra, raha miala sasatra tsy ho ela ianao, ary ny toetranao dia "tsy vonona" hanaovana akanjo ba.
Azo ampiarahana amin'ny karazan-tsakafo hafa ve ny sakafon'ny rano?
Io fanontaniana io dia natokana ho an'ny tsirairay ihany, satria rehefa mihinana sakafo hentitra roa dia hiharan'ny fihenjanana mafy ny vatana, izay mety tsy hampihena ny lanjany, fa amin'ny aretina.
Aza adino fa amin'ny sakafo rehetra dia ilaina ny mameno ny vatana amin'ny vitamina, mineraly ary singa faran'izay kely indrindra hamela azy hiasa ara-dalàna ary tsy hanome valiny amin'ny endrika fihenan'ny lanja fotsiny.
Ahoana ny fomba hifanarahana amin'ny psikolojika hahavery lanja
Ahoana ny fomba manadio ny vatana alohan'ny hampihenana ny lanja ao an-trano: fanafody, famerenana
Prev Ahoana no fiasan'ny fihenan-danja?
Manaraka Sakafo Breziliana - mora very lanja
85 fangatahana ao amin'ny angon-drakitra novokarina tamin'ny segondra 0,711.